Madaxweyne Sheekh Shariif oo booqasho ku tagay dhismaha wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya
» Madaxweyne Sheekh Shariif oo booqasho ku tagay dhismaha wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta Khamiis ah booqasho ku tegay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada.
Sheekh Shariif iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wasaaraddaas danjire Cabdisalaan Xaaji Axmed isagoo halkaas kusoo bandhigay xafiisyada dib-u-habeynta lagu sameeyay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu u mahad-celiyay shaqaalaha wasaaradda gaar ahaan shaqsiyaadka naftiisa u huray inuu badbaadiyo dukumintiyo muhiim ah oo ku sugnaay xaruuntaas.
Xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo u dhexeysa isgoysyada Zope iyo Banaadir ayaa waxaa sannadkii hore lagu sameeyay dib u habeyn, balse weli waxaa daggan dad shacab ah oo daganaa tan iyo markii ay dhacday dowladdii hore ee kacaanka.
Booqashadan ayaa imaanaysa iyadoo xukuumadda hadda jirta ay isku dayayso inay wasaaradihii hore ku howlgasho, iyadoo wasaaraddan ay noqonayso tii ugu horreysay oo uu booqsho Sheekh Shariif tan iyo sidii uu soo shaac baxay muranka siyaasadeed ee salka ku haya doorashooyinka.
Sannadkii hore ayuu baarlamaanka Soomaaliya dib u habeyn ku sameeyay xaruntiisii hore halkaasoo uu ku howlgalo, waxaana markii ugu horreysay lagu doortay Shariif Xasan oo noqday guddoomiyaha baarlamanaanka markii uu khilaaf awgiis isku casilay ra'iisul afhayeenkii hore.
Farhan Adan6/20/2011waxaan maqli jiray riyahu hadaay bari leeyahiin iyagaa dabadooda ku dadan lahaa.xamar markii (ahn) maxamed siyaad ka baxay tarfic light ku waa shaqaynayay maantana kama duwana harashiimo markii nugyaarka lagu dhuftay,isaga waxaa igala siidaran suxufiyiinta xamar oo bisadii afka kala qaadaba 10 maykarfoon la hor istaagaya,walee inta kan madax inii yahay nolol waa idinka xaaraan....ReplyDeleteAdd commentLoad more...